Sida loo hagaagsan iPad la Lugood iyo Waayaya Waxba
> Resource > Lugood > Sida loo hagaagsan iPad la Lugood iyo Waayaya Waxba
Waa fikrad wanaagsan inaad u hagaagsan iPad la Lugood. Mid ka mid ah wax aad ka faa'iideysan kartaa waa in aad u hagaagsan karaa audio iyo video ka iPad in ay Lugood u gurmad. Ka sokow, marka ay dhacdo in aad lumiso maktabadda Lugood u Shil computer ama xadidda, inaad si degdeg ah u dhisi karta. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta uusan u hagaagsan, waa inaad ka fool xaqiiqada ah in Lugood saari doonaa xogta ku saabsan iPad iyo dajiyaan waxa ku jira Lugood kombiyuutarka si aad iPad.
Si aad u hagaagsan xogta ka iPad in Lugood leh eber khasaaro, aad leedahay mid caawisa oo ku wanaagsan - Wondershare TunesGo (Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) . Waxay kaa caawinaysaa in aad u hagaagsan files music, playlists, filimada, podcasts, Lugood U, audiobook, music video, TV muujinaysaa on your iPad in Lugood.
Download barnaamijka si ha iPad u hagaagsan Lugood.
Labada Windows version iyo version Mac si fiican u samayn in aad iPad syncing la Lugood. Halkan, waxaan go'aansan in ay diiradda saaraan TunesGo Wondershare. Dadka isticmaala Mac, sameeyo habka la mid ah sida version Windows ma.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo taageertaa iPad la isha bandhigay hagaagsan, iPad 2, iPad Air, iPad Cusub, iwm si Lugood. Hubi halkan dhan iPads ay taageerayaan iyo macruufka ay .
Sida loo hagaagsan iPad la Lugood
Ku rakib iyo abuurtaan TunesGo on your computer. Waxaa Launch inay soo qaadaan suuqa kala this.
Fiiro gaar ah: Marka laga reebo iPad syncing in Lugood, TunesGo sidoo kale awood aad si hagaagsan iPad in kombiyuutarka .
Tallaabada 1. Isku iPad ah in kombiyuutarka la cable USB ah
Connect iPad ee aad jeceshahay in aad u hagaagsan oo Lugood in kombiyuutarka adigoo isticmaalaya cable USB ah. Ka dib markii lagu ogaan karo iPad, Mobile Tag ee macruufka iyo xogta ay furmo suuqa hoose ku tusi doonaa.
Tallaabada 2. nidaameed iPad in Lugood
Dhinaca khadka hoose uu furmo suuqa hoose, guji "Copy iDevice in Lugood". Daaqadda hoos-hoos, guji "Start". Markaas, dhammaan xogta, ay ka mid yihiin muusiga, filimada iyo audiobook lagu hubiyaa in uu furmo. Just sii xogta aad doonayay hubiyaa. Markaas riix "nuqul Lugood".
Marka laga reebo iPad syncing in Lugood leh habkan, siday u kala horreeyaan u hagaagsan aad dooratay karaa music, filimada, videos music, iwm si Lugood. In galeeysid bidix, guji "Media". On line ugu sareeya, guji tab kasta si hagaagsan music, filimada, podcast, Lugood U, audiobook, music video iyo TV muujinaysaa in Lugood.
Haddii aad guji " Smart dhoofinta in Lugood ", barnaamijkan shaandhayn doona macluumaadka aad u leedahay in Lugood kombiyuutarka, iyo hagaagsan bidix.
By gujinaya saddexagalka rogay hoos " Dhoofinta in ">" Dhoofinta in Lugood Library ", aad u hagaagsan kartaa dhammaan xogta ama si Lugood loo doortay siday u kala horreeyaan. Laakiin, aad u hagaagsan laga yaabaa xog ah in aad hore u lahaa in Lugood.
Laba siyaabood ayaa laga heli karaa. Kaliya dooro mid ka mid ah aad jeceshahay.
Si aad u hagaagsan playlist in Lugood, waxaad riixi kartaa "playlist" galeeysid bidix. Ka dib markii doorashada playlists aad jeclaan lahaa in aan u hagaagsan. Riix saddexagalka hoos "Dhoofinta in" ka dibna riix "Dhoofinta in Lugood Library".
Fiiro gaar ah: Wonershare TunesGo (Mac) ma taageeri syncing playlist iyo info music, sida ratings, ciyaaro dacwadood, si Lugood ee wakhtigan la joogo.
Download TunesGo in ay isku dayaan syncing iPad la Lugood.
Ma tirtiri kartaa Photos ka iPad - Xalliyaan Waxaa
Sida loo Download Music ka iPad in Computer
Sida loo Copy Pictures ka iPhone in Computer
Sida loo Delete Music ka iPad
Sida loo Beddelaan Torrent in Lugood
Tutorial si ay u gudbiyaan Playlists Lugood in Computer New
Sidee si ay u gudbiyaan Lugood in Android
Sida lagu Helo Album farshaxanka u Lugood Library in Dufcaddii
Hagaagsan Lugood leh Android 1 Click
Sida loo Beddelaan Rhapsody in Lugood
10 Talooyin Si Samee Lugood 10 Run si dhakhso ah